LDPE ကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် | လွှဲပြောင်းတိပ် | ကော်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Professional ကကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်လက်ကားအရောင်းဆိုင်ပုံနှိပ် - ဂွမ်ဒေါင်း HUALIBAO CO ။ , LTD မှ
acrylic ကော် PET ကာကွယ်ရေးရုပ်ရှင်
အလတ်စား adhesion OPP Protective Film
မြင့်မားသော AdPPP ကာကွယ်ပေးသောရုပ်ရှင်
အနိမ့် Adjustments OPP Protective Film
ဖောင်းမြောင်း PET ကာကွယ်ရေးရုပ်ရှင်
Matt Self-Adhesive Film အဘယ်သူမျှမကော်ကော်တည်ငြိမ်သောကာကွယ်မှုတိပ်
မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့် Self- ကော်ကပ်ထားသောအဘယ်သူမျှမကော်ကော်ကာကွယ်မှုတိပ်
Printed Black နဲ့ White ကကော် LDPE ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
Glass ကို Windows အတွက်အကာအကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
Black နဲ့ White က LDPE ကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
ပလတ်စတစ်ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက် Panel ကိုကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အရောင်အဘို့အကုန်ပစ္စည်းဒေတာများ: ကြည်လင်သော / ပြာသော / စသည်တို့ကို. အထူ: 30 - 150 မိုက်ခရွန်ရှည်: 50 1000m မှ, width: မက်စ် 1.5 ပရင့်ထုတ်ရန်: max3...
1.Hualibao ကထုတ်လုပ်ကော်ဇောကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကော်ဇောရုပ်ရှင်ပွဲတော်များအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာ data တွေကိုစာရွက်ခိုင်မာတဲ့ကော်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကော်ဇောကာကွယ်ဖြစ်ပါသည်, မူသောသင်တို့ကိုတားဆီးဖို့အဆင်ပြေပြေနဲ့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းပေးပါသည် ...
1. လူမီနီယမ်ကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အရာများမရှိပါများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာ data တွေကိုစာရွက်. အလွှာထူအကျယ်အလျားအရောင်ကော်အပူခုခံလျှောက်လွှာကော်မီလီမီတာမီတာမီတာ g / 25mm BH100-70 PE 0,07 ± 6% 1.25 200 BLACK ...
1.ထုတ်ကုန်အမည်များအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာမှာ Data Sheet: ပွင့်လင်းရှင်းလင်းမည် OPP ကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အခြေစိုက်ပစ္စည်း: ကော်၏ oriented polypropylene ပလပ်စတစ်အမျိုးအစား: solvent-based acrylic ကော်အရောင်: ပွင့်လင်း / Clear ကိုကော်: 3-500g / 25mm အကျယ်: စံ 1270mm ... ။
မြေပြင်အကာအကွယ်ပေးသောရုပ်ရှင်သည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလူကြိုက်များသောအလှဆင်သည့်ပုံရိပ်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်. ၎င်း၏အကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျစ်လျူရှုမရပါ. အဲဒီမှာရှိတယ် ...
E-mail ကို: rockyangjian@gmail.com
မူပိုင် © 2021 ဂွမ်ဒေါင်း HUALIBAO CO ။ , LTD မှ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.